Global Aawaj | कुनै पनि राष्ट्रको मौलिकतासँग फिरङ्गीहरूको पहिलो दुश्मनी कुनै पनि राष्ट्रको मौलिकतासँग फिरङ्गीहरूको पहिलो दुश्मनी
२६ जेष्ठ २०७६ 6:34 pm
दोस्रो पक्ष भनेको धर्म, राजनीति, शिक्षा, संस्कार, संस्कृतिप्रतिको गलत बुझाइ र अलगावबारे हो । पूर्वीय संस्कृतिमा धर्म भनेको सभ्यताको अनुभवबाट सिर्जित नीति–नियम हुन्, जसले समाजमा विकृति रोकेर, मनोबल बढाएर अन्ततः राज्यलाई सहयोग पुऱ्याउँछ । यो पक्ष भत्काइयो भने राष्ट्रियतामा सङ्कट आउँछ । देशको मौलिकतालाई आधार बनाएर, हावापानी, माटो, जनता र यसमा मौलिक भाषाको प्रभावबारे न्यायिक विश्लेषण गर्दै नेताहरूले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नुपर्ने हो । आर्थिकलगायत विभिन्न लोभमा परेर परधर्म वशीभूत हुँदै आफ्नो मौलिक सभ्यताउपर नबर्सिनुपर्ने हो । पश्चिमा धर्मदेवता जिससको रगतको साङ्केतिक होली वाइन, उनीहरूको पैसामा विदेश भ्रमण, उनीहरूको धार्मिक स्कुलबाट वारिधि नेपाली नेताको प्रिय बन्नु दुःखद् हो । यिनीहरूले हाम्रो सांस्कृतिक बिरासत बिस्तारै विदेशीको पाउमा सुम्पँदै छन् जस्तो आभास किन हुँदै छ अचेल ? त्यसप्रकारका प्रवृत्तिको प्रतिकार गर्नुको साटो हामी लाटिएका छौँ किन ? हाम्रो संस्कृति नै नरहे हामी रहुँला र ? यो प्रश्नले सबैलाई घोच्नुपर्छ अब ।
यीबाहेक हाम्रा आफ्नै स्वभावहरू पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छन् । काम वा श्रमप्रतिको विश्वासले हाम्रो काम नगरी धनी बन्ने चाहनालाई विस्थापित गर्छ । इमानदार जीवन–पद्धतिले हामीलाई सामाजिक र वैदिक मूल्यमान्यताको नजिक पुऱ्याउँछ । स्वाभिमानले हाम्रा मूल्यमान्यताउपरको आक्रमणलाई निस्तेज बनाउँदै हामीलाई जुझारु, सचेत र ज्ञानी बनाउँछ । सभ्यतासँगै जन्मिएका राम्रा र नराम्रा संस्कारहरूको प्रशोधनले हामीलाई युगसम्मत, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी बनाउँछ । अत हामीले हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई धर्म, संस्कृति र सभ्यताका समग्र सकारात्मक प्रवृत्तिसँग जोडेर हेऱ्यौँ भने मात्र हाम्रो आफ्नो मौलिक ज्ञानलाई अझ परिस्कृत बनाउन सक्नेछौँ । जय मातृभूमि !